Eto ianao : Fandraisana> homes
Fampidirana sary amin'ny email
Manomboka izao dia afaka mampiditra sary amin'ny alalan'ny email ianao. Izany hoe alefanao email amin'ny adiresy manokana ny sary dia mitranga eto amin'ny serasera. Mba hahafahana manao izany dia mila… Tohiny>>
Vaovao hafa >>...
Ampiasao ny solonanarana serasera.org
Adino? | Hisoratra anarana	Ohabolana androany
Aza be henatra imaso, fa be fosa ivoho.Henatra fa tsy hanatra.	Ohabolana hafa | Hampiditra ohabolana
abado, ahers, Belane, betakolaka, bouboussy, Chiquitto, Chris_601, diami, doudoutek, fitifia, ganakely, hantina, hayhay, herycool, ifarotsaka, ifyouonlyknew, jiimm, kalambo, khanou, KLOUTSOU, kyfr, lantolah, loux, lovsandria, madachris, mala, malakaya, mbolandri, mimita, mixatoon, Myniah, NAIVOKORAIL, narymozara, navigo, nevo, ngeza, nirinkosoa, njao, nofy, nouda, ramasyl, rhaye, RIANTSOA, robena, shiller, Snexim, steva, Tex, Tsarabe, valy, zafrika ... Tohiny	Zava-misy eto amin'ny takelaka
Nampiditra eritreritra mandalo i chantrire. Mametraha hevitra etoInona ary izao no tena mahagasy antsika amizao? Ohatran ny very ny hasina mahamalagasy an! ......38 minitra lasa
Nampiditra hevitra amin'ny sary i rakhaba. Jereo eto ny sary sy hevitramarina izany, grille de protection, merci...adin'ny 2 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny sary i methode. Jereo eto ny sary sy hevitraTsy tara-masoandro io fa grille antivol!
...adin'ny 2 lasa
Nanova ny mombamomba azy i famaky. Jereo eto ny mombamomba azyadin'ny 2 lasa
Niditra voalohany teto amin'ny takelaka i famaky. Mandefasa hafatra ho azy etoadin'ny 2 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny sary i rakhaba. Jereo eto ny sary sy hevitraeo ambany tara-masoandro...adin'ny 2 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny sary i rakhaba. Jereo eto ny sary sy hevitraefa ela angaha ?...adin'ny 2 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny sary i rakhaba. Jereo eto ny sary sy hevitrailay misolo maso sy mametaka tampin-tsofina e
Nampiditra hevitra amin'ny eritreritr'i lovah i manjanirina. Vakio etoTsy mianatra tsony... Mipetraka aty mintsy......adin'ny 3 lasa
Nampidirin'i Fahzou ho namany manokana i lesobika. Jereo eto ny mombamomba an'i lesobikaadin'ny 3 lasa
Nampidirin'i Fahzou ho namany manokana i ITolotsoa. Jereo eto ny mombamomba an'i ITolotsoaadin'ny 3 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny eritreritr'i desie i cazanova. Vakio etoBjr,
Mifalia @ ze efa toebatanao dia kolokoloy, na kel io na lehibe ts d any angamba no olana sa ahoana? Manaova fanatanjahatena(@ antonony)......adin'ny 4 lasa
Nampiditra hevitra amin'ny eritreritr'i cyril i cyril. Vakio etovao saika hiteny mintsy a. Am vazaha, raha mbola tsy te hanao na indispa dia minono aloha. Tsy tena koah loatra fa refa tafaraka am gasy dia otran'ny afahafa izany......adin'ny 6 lasa
Nampidirin'i timmi ho namany manokana i erkiady. Jereo eto ny mombamomba an'i erkiadyadin'ny 15 lasa
Nampiditra eritreritra mandalo i lovah. Mametraha hevitra eto@Manjanirina: salut enao ve mianatra no any france sa mipetraka any mihintsy?......adin'ny 15 lasa	Sary notsongaina
chantrire 24/05/2013 09:15
Inona ary izao no tena mahagasy antsika amizao? Ohatran ny very ny hasina mahamalagasy an! Hevitra
lovah 23/05/2013 18:42
@Manjanirina: salut enao ve mianatra no any france sa mipetraka any mihintsy?	Hevitra
lovah 23/05/2013 18:32
tsy toy izao isika raha tsy ny fitahian'i Jehovah. Mahaiza misaotra Azy sy midera ny anarany	Hevitra
maeva3rak 23/05/2013 17:02
Mahafinaritra ery izany mihaino hira malagasy izany :)	Hevitra
maeva3rak 23/05/2013 16:33
@Manjanirina: Manao ahoana Manjanirina! Tsika eto @serasera ihany ireto. Mandra-pihaona mandra-pitàfa aza fa tokony hifankahafantatra daholo ny tsir... Tohiny	Hevitra
Hampiditra | Tohiny	Namana vaovao
famaky, lovah, liloux, marikish, manumimi, yohan56, njaka050, jaben4, angotykely, SandraDiego	Tohiny
Bizna.serasera.orgVotre site iciGRATUITEMENT	------------=oOo=------------
Concept and Design © 1999 - 2013 Serasera.org: Eugene Hery Tel +39 338 744 2412 (Italie) Voasokatra tao anatin'ny 0.0513 segondra